गणतन्त्र दिवसकै दिन गुप्तआतङ्क
कोरोना भाइरस आतंक चलिरहेकै छ । कोरोनाले बाँच्न दिन्छ कि दिन्न अझै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । यो आतंकका वीचमा भारतले नेपाली कालापानी भूभाग आप्mनो नक्सामा समावेश गराएर आतंक थपिदियो । नेपालले ती क्षेत्र नेपालको हो भनेर आफ्नो नक्सा जारी ग¥यो । यो नक्सा संविधानमा समावेश गर्नका लागि संशोधन प्रस्ताव पेर गरियो, पास हुन नदिन भारतले अर्को आतंक खडा गरेर नेपाललाई त्राहीमाम त्राहिमाम पारिदिएको छ । नेपाल आफ्नो सीमा समस्याबाट प्रताडित हुनपुगेको छ । भारत नेपाललाई तर्साउन अग्रसर भइरहेको छ ।
नेपाल जेठ १५ गते १३औं गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा थियो, भारतले पूर्व राजदूत श्यामशरणलाई नेपाल पठायो र राजनीतिमा भुइँचालो ल्याउने कसरतमा लगाइरह्यो । श्यामशरणले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमात्र होइन, मधेशवादी दलका नेताहरुालाई समेत कानेखुशी गरेर राष्ट्रिय सहमति बन्न नदिन र सर्वसम्मत संविधान संशोधन हुन नदिने साजिस गरिरह्यो । एउटा कर्मचारीले राजधानीमा बसेर कोरोनालेजस्तै राजनीतिक आतंक मच्चाइरहदा पनि राजनीतिक दलपतिहरु आतंकित भइरहन्छन् र राष्ट्रको पक्षमा उभिने कि नउभिने भन्ने दोधारमा रहन्छन् भने यस्तो नेतृत्वले नेपालको सर्वाङ्गिण विकास गर्छ, स्वाधीनता बचाउँछ भन्न सकिन्न ।
भारत नेपाली भूमि मिच्न चाहन्छ । लद्दाखमा सीमा मिच्ने भारतलाई सवक सिकाउन चीनले सेना तैनाथ गरिदियो । अमेरिकाले मध्यस्थता गर्न तैयार भएका समाचार पनि आए । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको मूड बिग्रेको खबर पनि आए, त्यही भारतले नेपालको सीमा मिच्दा नेपालको मूड बिग्रेको अनुभूति भारतलाई भएन, सीमा मिच्न हुन्न भन्ने विवेक पनि भारतले राखेको देखिएन । भारत भनिरहेको छ– अहिले वार्ता गर्ने वातावरण छैन, वार्ता गर्ने तर सकारात्मक वातावरण बन्नुपर्छ आदि आदि । सकारात्मक भनेको के हो ? कालापानी क्षेत्र नेपालले छाड्नु सकारात्मक हो कि के हो ? कम्तिमा भारत वार्तामा बस्नुपर्छ, नेपाली पक्ष पनि परिपक्व गृहकार्यका साथ वार्तामा बसेर सीमा समस्या सधैंका लागि हल गर्नुपर्छ । सीमा समस्याले नेपाल र नेपालीले सधैं दुःख पाइरहने अवस्था अव रहनु हुन्न ।